पुनः डिजाइन ई-मेल: Features सुविधाहरू जुन पुन: सोच आवश्यक छ Martech Zone
पुनः डिजाइन ई-मेल: Features सुविधाहरू जुन पुन: सोचको आवश्यक पर्दछ
बिहीबार, अक्टुबर 8, 2015 बिहीबार, अक्टुबर 8, 2015 रिचर्ड स्मुलेन
तपाईले कसलाई सोध्नु भएकोमा निर्भर, ई-मेल 30० देखि 40० बर्ष बीचको छ। यसको मान स्पष्ट छ, अनुप्रयोगका साथ दुबै जीवनको सामाजिक र व्यावसायिक पक्षहरूमा फैलिएको। जे स्पष्ट पनि छ, तर पनि कसरी पुरानो ई-मेल टेक्नोलोजी साँच्चै छ। धेरै तरीकाले, आजका प्रयोगकर्ताहरूको बढ्दो आवश्यकताहरूमा सान्दर्भिक रहन इ-मेल पुनःप्रोफिट गरिएको छ।
तर कहिले कही तपाई कुनै चीज संग टिंकर गर्न सक्नुहुन्छ यो स्वीकार गर्नु भन्दा पहिले तपाईको समय बितिसकेको छ? जब तपाईं इ-मेलको समस्याहरू जाँच गर्न थाल्नुहुन्छ र सुधारको क्षेत्रहरू पहिचान गर्नुहुन्छ, तपाईंले बुझ्नुहुनेछ कि 'ई-मेल २.०' कत्ति फरक हुन्छ यदि आज निर्माण र शुरू गरिएको हो भने। कुन सुविधाहरू समावेश वा सुधार गरिनेछ? र के छोडिनेछ? के यसको नयाँ डिजाइनले अन्य अनुप्रयोगहरूलाई उधार दिन्छ?
यदि हामी आज इ-मेल पुन: सिर्जना गर्ने हो भने, यहाँ छ फाउन्डेसनहरू छन् जुन नयाँ इ-मेल प्लेटफर्मको रूपमा काम गर्दछन्। मलाई तपाईको बारेमा थाहा छैन, तर यदि म यो प्रणाली प्रयोग गर्न सक्दछु भने, म एक खुशी र अधिक कुशल शिविर हुँ।
कुनै अधिक ईमेल ठेगानाहरू छैनन्
हाम्रो इनबक्सहरू पूर्ण रूपमा अव्यवस्थित छन्। वास्तवमा, रेडिकाटी समूहका अनुसारआज प्राप्त ई-मेलको% 84% स्प्याम हो। किनभने यो धेरै सरल छ: इ-मेल ठेगानाहरू खुला छन्। सबैलाई आवश्यक पर्ने सबै तपाईंको ईमेल ठेगाना र 'voila' हो - तिनीहरू तपाईंको इनबक्समा छन्। इ-मेल २.० मा, त्यहाँ एक अनुमति-आधारित प्रणाली हुनेछ जुन एक एकल पहिचानकर्ता हो। र यो पहिचानकर्ताको मोबाइल नम्बरको रूपमा निजी हुनेछ।
एकचोटि हामीले प्रयोगकर्ताहरूको लागि 'पहिचान' र अनुमति विधि पाउँदछौं, हामी इनबक्सबाट मुक्त हुन सक्दछौं। हो, इनबक्स। ई-मेल २.० ले व्यवसाय र ग्राहक दुबै लाई राम्रो सेवा प्रदान गर्दछ यदि प्रत्येक 'कुराकानी' वा प्रत्येक सन्देश थ्रेडले 'कैच सबै' प्रकारको बाल्टिनलाई इनफाक्सबाट टाढा राख्यो। एक व्यवसाय र यसको दर्शक सदस्यहरु बीच एक सीधा पाइप एक धेरै स्वागत योग्य सुधार हुनेछ।
ईमेल ठेगानाहरूको खुला प्रकृति र स्पामको ब्यारेजको अर्थ पनि हामी भाइरसहरू, फिसि attempts प्रयासहरू, र घोटालाहरूका लागि अभ्यस्त भइसकेका छौं। निष्ठाको साथ, कुनै पनि चीज 'फिर्ता चार्ज' गर्न निषेध गरिएको छ। त्यसो भए, ई-मेल २.० को साथ, हामी बिलहरू तिर्न सक्षम हुनेछौं, गोप्य कागजातहरू हस्ताक्षर गर्न र बौद्धिक सम्पत्तिमाथि हस्तान्तरण गर्न। यो केवल तब हुन सक्छ यदि एक सुरक्षित, पूर्ण एन्क्रिप्टेड च्यानल प्रेषक र प्रापकको बीचमा खोल्दछ यसप्रकार गैर खण्डन सुनिश्चित गर्नुहोस्।
जवाफदेहीताको साथ वास्तविक समय संचार
जब तपाई ईमेल सन्देश पठाउनुहुन्छ, के हुन्छ? के यो रद्दीटोकरीमा छ, स्प्याम फिल्टरद्वारा समातिएको छ, पढिएको छ, बेवास्ता गरिएको छ? सत्य हो; तिमीलाई थाहा छैन। इ-मेल २.० को साथ, उत्तरदायित्व र रिपोर्टि front अगाडि र केन्द्र हुनेछ। धेरै कसरी टेक्स्टिंग कार्य गर्दछ, भविष्यको हाम्रो इ-मेल सन्देशवाहक-आधारित हुनेछ र वास्तविक समय, प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया प्रोत्साहित गर्दछ। जहिले पनि र सधैं कुशल।
मोबाइलको द्रुत बृद्धिले सुझाव दिन्छ कि यो सम्भावित प्लेटफर्मको लागि हो जुन केवल मोबाइल-प्रयोगको दिमागमा डिजाइन गरिएको हो। जीवन faster० बर्ष भन्दा पहिलेको भन्दा धेरै छिटो गइरहेको छ र त्यससँग, लामो ईमेलहरू र फैन्सी HTML ग्राफिक्स छन् जुन कुनै उद्देश्यले काम गर्दैन। व्यक्तिहरू केवल केहि शब्दहरू प्रयोग गरेर कुराकानी गर्न रुचाउँछन्, सामान्यतया च्याट प्लेटफर्मको माध्यमबाट। त्यसोभए ई-मेल २.० लाई अझ राम्रो जडानहरू सुनिश्चित गर्नुपर्दछ; छोटो, समयमै र मोबाइल फोनमा पढ्नको लागि डिजाइन गरिएको हो जहाँ प्राप्तकर्ता संसारमा छन।
जबकि यसले हाम्रो जीवनमा यति धेरै सन्दर्भ गर्न सक्दछ, यो निर्दिष्ट सन्दर्भ फाईलहरूको हो जुन ई-मेलमा संलग्न भएको थियो जुन हाम्रो मार्गमा पठाइएको थियो। औसत अमेरिकी संलग्न दिन र फाईलहरूको खोजीमा प्रति दिन करीव minutes मिनेट खर्च गर्दछ। प्रति वर्ष हराएको उत्पादकता को तीन दिन अनुवाद। इ-मेल २.० लाई पक्कै पनि हामीले कुन एट्याचमेन्टहरू पाइरहेका थियौं र त्यस अनुसार तिनीहरूलाई प्रबन्ध गर्ने थियो। यसलाई यहाँ फाईल गर्नुहोस्, त्यसलाई यहाँ सार्नुहोस्। भुक्तान आदिको लागि यो फ्ल्याग गर्नुहोस्।
टैग: ईमेलइमेल ठेगानाईमेल अनुलग्नकईमेल डिजाइनईमेल गतिशीलता
रिचर्ड स्मुल्लेनका सीईओ हुन् पाइपस्ट्रीम। यसभन्दा पहिले उनले सह-संस्थापक र सीईओ जिनेस मिडिया एलएलसीको रूपमा काम गरे, आउँदो जेनरेशन बहुविध मिडिया, वास्तविक समय भिडियो विज्ञापन प्लेटफर्म।
सबैले विज्ञापनलाई घृणा गर्छन् ... भुक्तानी गरिएको विज्ञापन अझै पनि काम गर्दछ?